Ny mpanelanelana dia ny hafatra, Church World Church of God Switzerland (WKG)
Tena fahasoavana madio dia voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny zava-bitany eo alohany (Efes. 2,8–9 GN).
Mahafinaritra tokoa raha kristiana mianatra mahatakatra fahasoavana isika!
Ny fahatakaran-javatra izany dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika antsika manokana. Mahatonga antsika kristiana milamina sy fifaliana izay any ivelany fa tsy ao anaty. Ny dikan'ny fahasoavan'Andriamanitra: miankina amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika ny zava-drehetra fa tsy izay ataontsika na tsy azontsika atao. Tsy afaka mahazo famonjena isika. Ny vaovao tsara dia satria tsy afaka mividy izany mihitsy isika satria efa nataon'i Kristy izany. Ny hany azontsika atao dia ny manaiky ny nataon'i Kristy ho antsika ary maneho fankasitrahana lehibe noho izany.
Nefa mila mitandrina ihany isika! Tsy afaka mamela ny zava-poana ny olombelona tsy hitarika antsika hieritreritra avonavona isika. Tsy ho antsika irery ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mahavita antsika tsara kokoa noho ny kristiana izay mbola tsy namantatra tsara ny toetry ny fahasoavana ary tsy misy tsara noho ny tsy kristiana izay tsy mahalala momba izany. Ny tena fahalalana ny fahasoavana dia tsy mitondra avonavona fa ny fanajana lalina sy ny fiderana an'Andriamanitra. Indrindra rehefa tsapantsika fa misokatra ho an'ny rehetra ny fahasoavana fa tsy ny kristiana ankehitriny. Mihatra amin'ny olona rehetra, na dia tsy mahalala an'izany aza.
Maty ho antsika i Jesoa Kristy fony mbola mpanota isika (Romana 5,8: XNUMX). Maty ho an'ny velona rehetra ankehitriny izy, ho an'ireo rehetra izay maty, ho an'ny olona rehetra izay nateraka fa tsy ho antsika ihany, izay miantso antsika ho Kristianina ankehitriny. Izany dia tokony hahatonga antsika hanetry tena sy hankasitraka avy any am-pon'ny fontsika satria tia antsika Andriamanitra, mikarakara antsika ary maneho fahalianana amin'ny rehetra. Tokony hiandrandra ny andro hiverenan'i Kristy àry isika ary hahalala fahasoavana ny rehetra.
Miresaka momba ny fangoraham-pon'Andriamanitra sy ny fikarakarana an'ireo olona nifanerasera amintsika isika? Sa ve isika mamela ny tenantsika ho variana amin'ny fisehoana olona, ​​ny fiaviany, ny fanabeazana na ny firazanana ary hianjera amin'ny fandriky ny fitsarana sy hitsara azy ireo ho lehibe kokoa ary tsy misy vidiny noho ny fiheverantsika ny tenantsika? Tahaka ny misokatra ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny rehetra sy ny fiantraikany amin'ny tsirairay, koa te-hiezaka ny hitazona ny fontsika sy ny saintsika malalaka ho an'izay rehetra hihaona amin'ny lalantsika amin'ny fiainana.
Ray mahafinaritra ô, ampio izahay hahatakatra ny fitahiana lehibe momba ny fahasoavana ary hamita izany amin'ny fifandraisanay rehetra. Aoka ireo izay tiantsika sy ireo izay manandrana antsika amin'ny fitsapana. amena
Ny fahasoavana asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra